ग्याल्जेन भाइ, यो देशमा बाहुन बाहुन भएर जिउन पाउन, म तामाङ स्वतन्त्र हुन पाउ | Himal Times
Home Flash News ग्याल्जेन भाइ, यो देशमा बाहुन बाहुन भएर जिउन पाउन, म तामाङ स्वतन्त्र...
ग्याल्जेन भाइ, यो देशमा बाहुन बाहुन भएर जिउन पाउन, म तामाङ स्वतन्त्र हुन पाउ
वाङजु वाईबा तामाङ (वाङजु सरकार )
लगभग ४/५ वर्ष पहिला देखि नै फेसबुकमा जोडिएको थियौ । हामि पहिचानको ओकालत गर्दै ताम्सालिङको माग गरिरहदा भाइहरु कमेन्टमा उडाउथ्यौ । हाम्रो भन्नु यो थियो, यहि देशमा बाहुन बाहुन भएर जिउन पाउन । बाहुन जनै भिर्दै स्वतन्त्र हिडे जस्तै म तामाङ मेरै मौलिक पहिचानमा हिड्न पाउ ।
हामी कुनै जातिलाइ निषेधको राजनितिमा थिएनौ । जसरि राज्यले तामाङलाइ सरकारि सयन्त्रले निषेधको व्यवहार गरेको थियो । हामी समान सहभागिता र समता मुलक समाजको परिकल्पना उभियौ । तर भाइहरु बाहुन क्षेत्री यो देशका शरनार्थि र देशैबाट लखेट्नु पर्छ भन्ने गैरन्यायिक तर्कमा अडियौ । यहि क्रममा हामी बिच भनाभन सम्म भयो र भाइले ब्लक समेत गरेर गएछ । फेरि केहि महिना पछि ब्लक खोलेछ ।
हो हामी दमनमा परेको हो तर दमन गर्नेलाइ निषेध गरेर सत्ता सामु उभिन उहिलेको युग फर्किनु पर्छ जुन बेला राज्य हडप्न पाइन्थ्यो अहिलेको माहोल यो होइन । यहा बैचारिक बिमर्ष र सामुदायिक न्यायलयको प्रयोगबाट मात्रै सत्तामा उभिन सकिन्छ । यदि हामी पनि दमनमा नै उत्र्यौ भने भोलि हामि बिरुद्ध पनि आन्दोलन हुन्छ । हामि यो संसार जोगाउने आदिवासि हौ । कसैलाइ लडाएर आफ्नो स्वार्थ पुर्ति गर्ने भित्र पर्दैनौ । हामि हाम्रो अधिकारको लागि लडने हो । चीनको जनताको उदाहरण दिदै आफैलाइ कमजोर बनाउनु गलत हो । हामी दबाउन होइन जोगाउन, मार्न होइन बाँच्न उभिएको हौ । आदिवासि दर्शनले आफ्नो स्वार्थको लागि युद्ध गर्दैन । तर आफु बाँच्नको लागि युद्ध भए सामना गर्न भने पछि पर्दैन । त्यसैले निषेधको राजनिति छोडेर एकता बद्ध आन्दोलनमा आउन मङ्गोल मित्रहरुलाइ मनैबाट अनुरोध गर्छु ।
यो देश हाम्रो पनि हो । हामीले नि निस्फिक्री जिउन पाउनु पर्छ । झन्डामा बिमति राखौ भाषामा बिमति राखौ । धैर्य गरौ । सडकमा बालौला यदि दमनमा राज्य उत्रिन्छ भने, हामी आफै पनि बालौला ठुलो कुरो भएन तर कुनै एक जत्थाको प्रयोगमा पर्नु गलत हो । भाइ तिमि तामाङ म नि तामाङ नै हु । तिम्लाइ जस्तै पिडाबोध मलाइ पनि हुन्छ । यहि राज्यले दबाएको हामी एकै परिवारको सन्तान किन अलग अलग पक्रिन्छौ ? म सडकमा पक्राउ पर्छु । करङ बाँच्नेगरि कुटछ । मलाइ दुख्दैन किनकि म संग बिद्रोहि चेतना छ जसरि तिम्रो बिद्रोहि चेतनाले तिमिलाइ आज जेल पुर्यायो । यसरि नै अलग अलग लडेर हामी किन शक्ति खेर फाल्छौ ? तिमिले खोजेको नि स्वतन्त्रता सहितको समता मैले खोजेको उहि मात्रै नाम अलग तिमि ताम्सालिङ स्विकार्दैनौ । म बाहुन क्षेत्रीलाइ लखेटौ भन्ने नारा स्विकार्दिन । यो निशेधको राजनितिहरु छोडेर राज्य संग मिलेर पैठेजोरी खेलौ । जहा हामि नि स्वतन्त्र सास फेर्न सकौ ।
आज तिमिलाइ तिम्रो संगठनले उछृङ्खल समुह भनेर तिम्रो बिद्रोहि चेतनालाइ नै बदनाम गर्यो । त्यो बिद्रोह जन्माउने यहि संगठन थियो तर आज राज्य संग लड्न हात कमायो । तिमि र मेरो मुक्ति त त्यहा लागेर पनि नहुदा रहेछ । अब निस्कौ न समाबेशिताको पक्षमा उभिदै बिद्रोहमा जहा तिमि संगै बाहुन बाजेले पनि ताम्सालिङ जिन्दाबाद भन्ने बाटो रहोस । क्षेत्री बाजेले पनि ताम्सालिङमा मन्त्री बन्दै तामाङहरुमा स्वतन्त्र जिउन सिकाउन् । राज्य जातिबादि भयो हामि जातिबादि भयौ भने राज्य र हामीमा के फरक हुन्छ र ?
हाम्रो मुद्धा लड्दै गर्दा अरु माथि अन्याय नहोस । झन्डा जलाउला पछि यदि राज्यले सुनिएन भने तर एक माग राखि हेरौ । एक खेप सबै जागि हेरौ । तिमिलाइ पर्दा को आउछ ? आज यति लाख धरौटि तिर्नु पर्छ रे भन तिम्रो साथ दिनेहरु टाप कस्छन । तिमिलाइ साथ दिने कोहि रहन्न । त्यसैले हामी न्यायिक लडाइ लड्नु छ । बरु ज्यानै फालौला एकदिन तर हामि मरेसि हाम्रो मुद्धा सफल हुने ठाउमा फालौ न । तिमि जेल पर्यो तिम्रो मुद्धा नै गलत मानि रहेको छ । तर पिडा एकै हो । दमन एकै हो । तिमि छिटो ब्युझियौ अरु ब्युझिन सकेनन । तिमी तातै खौ तातै मरौ भयौ र आज यस्तो भयो ।
कानुनिक रुपमा हेर्दा भाइ गलत भए पनि सत्ताको चस्मा निकालेर दमनको पिडा हेरि भन्नु पर्दा यो मात्रै शुरुवात हो । यसरि नै एकल शाषन पद्धति चलिरहने हो भने कयौ ग्याल्जेनहरु जन्मिन सकिन्छ । यसमा राज्य पनि सजक भएको राम्रो हुन्छ ।
Previous articleबुवाको मुख हेर्ने दिनको अवसरमा अशक्त जेष्ठ नागरिकको घरघरमा सहयोगी नेपाल
Next article“लौ न बोलिदेऊ” गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक (भिडियोसहित )
विषाक्त स्यानिटाइजर उत्पादन गर्ने खत्री पक्राउ, १० ट्रक उत्पादन सामाग्री वरामद